Tirada qaxootiga ku nool Uganda oo ka badan intii hore loo shaaciyay - BBC News Somali
Tirada qaxootiga ku nool Uganda oo ka badan intii hore loo shaaciyay
QM ayaa sheegeysa in 85% qaxootiga yimid Uganda ay yihiin haween iyo carruur
Tirakoob lagu sameeyay tirada qaxootiga ku nool dalka Uganda ayaa lagu sheegay in tiradii hore loo shaaciyay laga badbadiyay oo lagu daray in ka badan 300,000 oo qof. Hannaanka xaqiijinta, oo billowday bishii March, ayaa haatan la soo gabagabeeyay.
Warsaxaafadeed, ay si wadajir ah u soo saareen hay`adda qaxootiga Qaramada Midoobay ee UNCHR iyo xafiiska raysal wasaaraha ee dalkaas ayaa lagu sheegay in tirada qaxootiga ee ku sugan dalkaas ay yihiin 1.1 million oo qof, oo aysan ahayn 1.4 million sidii hore loo shaaciyay.
Tirakoobka ayaa laga sameeyay xeryaha qaxootiga ee Uganda iyo sidoo kale gudaha magaalada Kampala.
Bishii February, waxaa jiray eedeymo ku aaddan in saraakiisha dowladda Uganda ay ka badbadiyeen tirada qaxootiga.
Martigalinta qaxootiga oo Uganda u horseedday horumar ganacsi
Afar sarkaal oo waaxda qaxootiga ka tirsanaa ayaana arrintaas darteed shaqada looga cayriyay.
Warsaxaafadeedka ayaa lagu sheegay in kala duwanaanshaha u dhaxeeya tirada sabab looga dhigi karo tirada qaxootiga ka imaanayay dalka Suudaanta Koofureed ee ku qulqulayay Uganda intii u dhaxaysay sanadihii 2016 iyo 2017.
Qaxootiga qaarkood ayaa laga yaabaa in laga diwaangeliyay in ka badan hal xarun, halka qaar kalena ay dib ugu laabteen meelaha u dhow xadka.
Uganda ayay dunidu ku ammaantay siyaasaddeeda qaxootiga ee albaabka furan, waxayna qaabishay tiro badan oo qaxooti ah, xilli ay dalalka galbeedku albbaabadooda xirteen. Balse tirade laga badbadiyay horraantii sanadkan ayaa hoos u dhigi gaartay sumcaddan.